Dns ပြောင်းလဲခြင်းသည်.... ?????? — MYSTERY ZILLION
Dns ပြောင်းလဲခြင်းသည်.... ??????
October 2008 edited March 2009 in Networking
ကျနော့်ရဲ့ Router SMC သည်.. Static IP ပေးထားပါသည်...
DNS ကိုလည်း 203.........69, 203..........73
ပေးထားပါသည်။။။ သို့ပေမဲ့ CMD>ipconfig/all ရိုက်ထည့်ကြည့်သည့်အခါတွင်
DNS သည် AUTO CHANGE TO (85.255.112.36) (85.255.112.41) သို့ပြောင်းလဲသွားပါသည်... အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်များလည်း မမှန်ဖြစ်နေပါသည်..
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ပြောင်းလဲသွားရပါသနည်း ဆိုသည်ကို အင်မတန် ထူးဆန်းပါသည်။။
မည်သို့သော အကြောင်းအရာကြောင့် ပြောင်းလဲသွားပါသနည်း............ ခင်ဗျာ။။။။။။။။။
ကွန်နက်ရှင်များလည်း ကောင်းပါသည်..... ကူညီပြီး ဦးနှောက်စားပေးပါဦးဗျာ............:77::77::77:
Smc က နည်းနည်းဂေါက်တယ်ကြားတယ် ... ဆားဗစ်ပို့ကြည့်ပါလား
SMC is not sutibal for use
pls change other router
MPT adsl အတွက်သုံးလိုရမယ့် router ကိုပြောပြပေးပါ..SMC သုံးနေတာမကောင်းလို့ပါ..linksys,Netgear တို့သုံးလို့မရလို့ပါ
linksys, က MPT ADSL (india) လိုင်းမှာသုံးလို့မရဘူး။ SMC ကတော့အဆင်ပြေတယ်။
ဒါပေမယ့် ခဏခဏ ပိတ်ပေးရတယ်။ ဟမ်းသွားလို့။ တစ်ခြားကောင်းတဲ့router ရှိရင်ပြောကြပါအုံး
ကျွန်တော်လည်း SMC သုံးပါတယ်။ အဆင်မပြေပါဘူး။ ခဏခဏ hang ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘယ် router သုံးရင် ကောင်းမလဲ။ Linksys & Netgear ဘာပိုကောင်းသလဲ။ Linksys WRT54G2 ရော ကောင်းပါသလား။ ဒီထက်ပိုကောင်းမဲ့ router ရှိရင်လည်း အကြံပေးကြပါဦးဗျာ။
အဲလိုတွေ အရမ်း ဟမ်းနေသော SMC ကို
ကျနော် ကျောခိုင်းပစ်ရတော့မှာလား ခင်ဗျာ.... မီးပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်တော့ ပြန်ကောင်းလာပြန်တယ်ဗျ............ ကွန်နက်ရှင်ဆွဲတဲ့ အခါမှာ နဲ့ firewall ကို ဖွင့်ထားတဲ့ အခါမှာတော့ နဲနဲ ပြန်ပြန်ကျနေတယ်နော်..........
ကျော်ခိုင်းရမှာကလည်း ကျနော့် ရဲ့ SMC က wireless ဖြစ်နေတယ်ဗျ အဲဒီ ဖန်ရှင်လေးပါတော့
နှမြောနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလည်း ဗျာ.......... :77::77::106:
SMC router likeacooling status.So that pls install to the 8" AC fan near to the router to sink heat.
I also get these error and fix it above error.
NPThant wrote: »
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် သုံးလိုက်တယ်ခင်ဗျ တော်တော် အဆင်ပြေသွားတယ် ဗျာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ. :5:
smc က အရမ်းကို အအေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်... နောက်တစ်ခုကတော့ wireless function ထုတ်လိုက်ရင် လည်း errors တက်တယ်ဗျ အဲလိုကြီးပဲလား ဗျာ............ :106:
If I am not mistaken, this issue was cased due to Virus.
I agree SMC is not really good but it should not be effect only on DNS. I agree for connectivity issue.
SMC has some connectivity problem with some notebooks. You can adjust using channel for that issue.
For your issue, I also encountered what you faced. Please visit the website below and getaremover.
I wonder one thing is , Why you answer that You change the router and working fine. I can't reach on your answer.
အကိုက ဘယ်နယ်ကလဲ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ MPT india ADSL နဲ့ linksys router နဲ့ရပါတယ်။
ကျတဲ့ ip နဲ့ gateway နဲ့ network မတူလို့လားမသိဘူး။ နဂိုတုန်းကတော့မရဘူး ဒါပေမယ့် ပြန်ရတာကြာပီဗျ။ စမ်းကြည့်ပါအုံး။ netgear တို့ trendnet တို့လညး်ကောင်းပါတယ်
maharbandola wrote: »
I used Dlink and it is all OK for for all connections. Thanks for SMC model posts because I was heard SMC is no good from MZ posts. Therefore I don't use SMC. SMC price and Dlink price are not much difference. SMC is 50000 -60000 Kyats and Dlink is 70000 to 75000 Kyats. Use dlink if you need to install router.
ဆက်သွယ်ရေးကရောင်းတဲ့ MIDAS သာသုံးပါဗျာ..
အဲဒါအကောင်းဆုံးပဲ.. သူကမီးကစားရင်တော့ မခံနိုင်ဘူး ခန ခန မှိတ်တယ် Inverter always on ပီး သုံးလိုက် ဒါဆို ဂွတ်သွားမယ်..
ကျနော်တော့ Midas နဲ့ linksys AM300 ကို အလှည့်ကျသုံးတယ်
Midas က dsl connection မြန်မြန်ဆွဲခေါ်နိုင်တယ်.. မီးအား အတက်အကျတော့မခံနို်င်ဘူး..heat လည်း တက်လွယ်တယ်.. adaptor ပြောင်းသုံးရင် ရတယ်လို့ပြောတာပဲ
Linksys က dsl connection ခေါ်ရင် နည်းနည်းကြာတယ် ဒါပေမယ့် မီးအား ကစားတာခံနိုင်တယ်.. heat သိပ်မတက်ဘူး..
ကျွန်တော့အထင်တော့ Router ကြောင့်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ Trojan Attack ကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။
Registry မှာ Manually ၀င်ပြင်ပေးလည်း ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဆော့ဖ်၀ဲနဲ့ဆိုရင်တော့ ပိုအဆင်
ဆော့ဖ်၀ဲနဲ့ရှင်းပြီးသွားရင် Restart ချလိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တော့ XP မှာပဲစမ်းဖူးပါတယ်။
2003 Server မှာတော့မစမ်းဖူးသေးပါဘူး။
အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပေးပါ။